Sawirro: Munaasabada 26-June ee xornimadii Gobollada Waqooyi oo xalay lagu qabtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Munaasabada 26-June ee xornimadii Gobollada Waqooyi oo xalay lagu qabtay Muqdisho
MAREEG 26 June 2015
Munaasabadda loogu dabaal degayay 55-guuradii ka soo wareegatay markii Gobollada Waqooyi ay xornimada ka qaateen Ingiriiska iyo markii la taagay Calan Soomaaliyeed ayaa xalay lagu qabtay Aqalka dowladda Hoose ee degmada Xamar weyne.
Munaasabaddan ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’iisul Wasaaraha, Ra’iisul Wasaare kuxigeenka, Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, Xildhibaano, Taliyeyaal ciidan iyoMas’uuliyiin ka tirsan Gobolka Banaadir iyo dadweyne ka kala yimid degmooyinka.
Intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa lagu soo bandhigay suugaan ka hadleysay qiimaha xornimada iyo Taariikhdii loo soo maray halganka xornimo doonka Soomaaliyeed iyo markii ay gobolada Waqooyi xornimada qaadanayeen.
Ku-simaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Guddoomiye ku-xigeenka Gobolka ee dhanka Siyaasadda Maxamed Axmed Diiriye ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in aqalka dowladda Hoose ee Xamar agu qabto xuska 55 guurada ka soo wareegtay markii gobolada Waqooyi ay xornimada ka qaateen gumeystihii Ingiriiska.
Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga qaban qaabada ee todobaadka xoriyadda Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in uu hambalyo u dirayo dhamaan Ummadda Soomaaliyeed, meelkasta oo ay joogaan, waxaana uu intaa ku daray xornimada loo soo maray halgan dheer, bulshadana looga baahanyahay inay ka qeyb qaataan todobaadka xoriyadda.
Ra’iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in Ummadda Soomaaliyeed, looga baahanyahay sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen in markale la abuuro jawi sahlaya in dib loo soo celiyo midnimada Ummadda Soomaaliyeed, isagoo xusay in taasi lagu sixi karo qaladaadkii horey u dhacay.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay door muhiim ah ka qaataan midnimada shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo xiray xafladda ayaa ugu horeyn hambalyo u diray xuska 55 guurada bulshada ku nool gobollada Waqooyi, waxaana uu Alle ka baryay in sanadkan kiise kale ay ummadda Soomaaliyeed ku gaaraan bash bash iyo baraare.
Ugu mdabeyntii Madaxweynuhu waxa uu salaam sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo calanka Jamhuuriyadda laga taagay aqalka dowladda Hoose ee Xamar, halkaasi oo ahayd goobtii 1-dii Luulyo ee sanadkii 1960-kii laga taagay calanka Jamhuuriyadda, xilligaasi oo ahayd israacii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur, iyo markii ay Koonfurta xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga.
Qaxooti horleh oo soo gaaray Dekedda Boosaaso
Deg Deg: Al Shabab oo Leego Ka Afduubatay 23 Sarkaal oo Dowladda ka tirsan